ULTRA HD ဖိုရမ်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် UDD ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသော UHD ၀ န်ဆောင်မှုများအားပယ်ဖျက်ရန်အတွက်ပထမဆုံးစက်မှုလမ်းညွှန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2016 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Ultra HD ဖိုရမ် 2016 ဆုံး-to-end & တိုက်ရိုက်ကြိုတင်အသံသွင်း UHD SERVICES စေလွှတ်ပထမဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း Guidelines ဖြန့်ချိ
Ultra HD ဖိုရမ် 2016 ဆုံး-to-end & တိုက်ရိုက်ကြိုတင်အသံသွင်း UHD SERVICES စေလွှတ်ပထမဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း Guidelines ဖြန့်ချိ
က Ultra HD ဖိုရမ် 2016 အတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက် & Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသော UHD န်ဆောင်မှုများစေလွှတ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များလမ်းညွှန်ချက်များဖြန့်ချိ
Las Vegas မှ, ဧပြီ 18th 2016 - အဆိုပါ က Ultra HD ဖိုရမ်ကိုယနေ့ UHD အကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ Workflows အပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ၏ပထမအဆင့်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ က Ultra HD ဖိုရမ် ultra-high-definition (UHD) ကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံကိုလွယ်ကူချောမွေ့လိမ့်မည်ဟုနည်းပညာများ၏နိဒါန်းအဘို့အစက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် defining ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယင်းလမ်းညွှန်ချက်များ၏ဤပထမဦးဆုံးဖြန့်ချိ 46 အဖွဲ့အစည်းများ၏ဖိုရမ်ရဲ့ကြီးထွားလာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် 2016 အတွက်ထားရှိပစ်မှတ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစိန်ခေါ်မှုများထိုကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်မှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် SDR နှင့် HDR အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ UHD အစီအစဉ်၏စားသုံးသူဒီကုဒ်ဒါအဖြစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များအကောင့်သို့စိန်ခေါ်မှုနောက်ပြန် Compatibility ကိုသတ်များ၏မျက်နှာများတွင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာယူပါ။ တစ်ဦးကအနာဂတ်လွှတ်ပေးရန် 2017 နှင့်ကျော်လွန်ပြီးပစ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်။
Thierry Fautier သည်သမ္မတ က Ultra HD ဖိုရမ်ကျနော်တို့အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေး, ထုတ်လွှင့်, ဝန်ဆောင်မှုပေး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ, နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, CDNs, chip ကို-ချမှတ်သူများနှင့် device ကိုထုတ်လုပ်သူများထံမှပံ့ပိုးမှုများကို synthesizing ဒီစုပေါင်းအလုပ်ဂုဏ်ယူနေကြသည် "ဟုပြောသည်။ ဤသည် MPEG မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်း, ဒီဗွီဘီ, Dash-IF, ATSC, SCTE, မပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှပါပြီမဟုတ်ဘူး SMPTE, CableLabs, NAB နှင့်ခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေးရုံး built လျက်ရှိသည်ဘယ်သူကိုအတူ UHD မဟာမိတ်အဖွဲ့။ "
အပြည့်အဝလမ်းညွှန်ချက်များစာရွက်စာတမ်းသာရရှိနိုင်ပါသည် က Ultra HD ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်။ သို့သော်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်မှ posted ပါလိမ့်မည် ultrahdforum.org/resources/phasea-guidelines-description/.
အဆိုပါ က Ultra HD ဖိုရမ် IBC 2016 မှာကျယ်ပြန့်ရှိနေခြင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတဲ (SU16010), တနင်္လာနေ့တွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ, 18 မှာဧပြီလ 11 N262 အတွက်ဖြစ်၏ 20 မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ9အပေါ်တစ်ဦး Masterclass အခန်းထဲမှာ S225 အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဖြစ် networking နှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာအစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။
ယင်းအကြောင်း က Ultra HD ဖိုရမ်
အဆိုပါ, 2015 ဖွဲ့စည်း က Ultra HD Forum ၏စျေးကွက်ကလေးမွေးစားခြင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် က Ultra HD လာမယ့်မျိုးဆက်ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်နည်းပညာများ၏ကျယ်ပြန့်ထား၏ phased မိတ်ဆက်စကားများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် defining ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်စံဖှံ့ဖွိုးတိုးတလှုပ်ရှားမှုများ align မှစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းကောင်များနှင့်ပူးပေါင်း။ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်၏စာရင်းတစ်ခုမှာရရှိနိုင် ultrahdforum.org.
မီဒီယာနှင့် Analyst, အဆက်အသွယ်:
Marta Twardowska, [အီးမေးလျ protected] + 31 621184585
Marta Twardowska အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် SoftAtHome နှင့် RDK တို့ပူးပေါင်းကြသည် - မေလ 26, 2020
SoftAtHome နှင့် Qualcomm Technologies တို့ ပူးပေါင်း၍ Home Gateways ကို 5G-lest Services Services Platforms သို့ပြောင်းလဲရန်ပူးပေါင်း - အောက်တိုဘာလ 15, 2019
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် 2016-04-18
ယခင်: NAB 2016 Booth C11323 @ NEW Frezzi နေရောင်ခြည်
နောက်တစ်ခု: လူငယ်ကဏ္ဍပြရန်၏ 2016 အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာဇာတ်လမ်းပြောပြဘို့ AccuWeather မိတ်ဆက်နယူး CampaignTrail လျှောက်လွှာ